China Silicone Rubber mpempe akwụkwọ N'ihi na Glass Industry emepụta na suppliers | Cayce Mee
Silicone roba mpempe akwụkwọ maka iko ụlọ ọrụ bụ a isi akụrụngwa nke anyị ụlọ ọrụ raara nye na-akwado iko agụụ laminated ọkụ dị ka ahịa ina.
Laminated iko agụụ oku eji agụụ ụkpụrụ, na-eme iko kpụ ọkụ n'ọnụ n'okpuru agụụ ọnọdụ, na ikuku mgbali, ka iko ke agụụ akpa enwee ewepu ikuku na-enweghị ike ime ka egosipụta, agụụ akpa bụ n'okpuru kpo oku na agụụ pumped ọnọdụ ime abụọ ma ọ bụ karịa iberibe iko na EVA na-ekpo ọkụ ọnụ.
Agụụ akpa bụ a isi akụkụ nke iko agụụ laminated oku, ọ na-eme ka nke abụọ iberibe silicone roba mpempe akwụkwọ na silicone akara onu, silicone roba mpempe akwụkwọ bụ a isi akụrụngwa nke dum laminated ọkụ, ya àgwà ozugbo emetụta àgwà nke iko ngwaahịa.
Na-adọ adọ ike
Akụkụ abụọ na-eji ire ụtọ
Otu akwa ọka
Oke kachasị obosara nwere ike ịbụ 3800mm na enweghị nsị, ọkpụrụkpụ 2-8mm, ogologo ọ bụla.
Ihe eji edozi silicone, akwa ekwenti
Ogologo ọrụ ọrụ sitere na 0 ruo 260 Celsius
0 mpaghara / acid / alkali / mmanụ / mmiri / eyi / tearockproof
Inogide, mgbochi ịka nká, na-abụghị ọcha ọcha, ala flammability
Igwe ihe eji arụ ọrụ, tebụl ironing, igwe na-ekpo ọkụ
Ngwa eletriki na eletriki, kọmputa, ndị na-ebi akwụkwọ
Otgbọ ala, aerospace, uwe na ụlọ ọrụ ike
Ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ, arịa kichin, ite mmiri, ngwa gas
Mkpa chromatography silica gel efere, na-akpọ akwa akwa eguzogide silica jel efere. Ọ na-eme nke dị ọcha dị mkpa akwa oyi akwa chromatography silica gel (ntụ ntụ) agwakọtara na ụfọdụ ego nke nragide na sprayed. Elu ya n'ozuzu ya bụ iko, na mpempe akwụkwọ aluminom na-ewu ewu na mba ọzọ. Iji mee ka bọọdụ agbakwunye.
1. Mmetụta nkewa dị mma, ọnụ ọgụgụ nke efere dịkwa elu.
2. Ebe ntụpọ dị ntakịrị, nke dị mma maka nyocha usoro.
3. Oge nkewa dị mkpụmkpụ.
4. Nnukwu uche, ntụpọ doro anya, na-abụghị mgbasa
Nke gara aga: Ala Cover Rubber warara
Osote: Silicone Rubber mpempe akwụkwọ N'ihi agụụ Press